देवघाट जोगाएर नारायणीमा बहुउद्देश्यीय जलाशयुक्त आयोजना ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
देवघाट जोगाएर नारायणीमा बहुउद्देश्यीय जलाशयुक्त आयोजना !
The newly built electric crematorium on the premises of Pashupatinath Aryaghat, in Kathmandu, on Sunday. Photo: THT
८ असोज, काठमाडौं । देवघाट क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको चर्चा ३५ वर्षपछि फेरि ब्युँतिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धार्मिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिने यो क्षेत्रलाई कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाको खोज थालेको छ ।